Teny fanaovana Batisa - Ohabolana amin'ny Batisa
Fitahiana ny ankizy. Mikaroha kely amin'ny topy maso momba ny firariana isan-karazany indrindra ho an'ilay zaza vita batemy ary tadiavo ny teny mety sy ny teny nety ho an'ny batisan'ilay zaza.
Teny fanaovana batisa tsara tarehy - teny ho an'ny batisa
Teny fanaovana Batisa - Ohabolana amin'ny batemy - © angel_nt / Adobe Stock
Fa ny teny nalaina avy ao amin'ny Baiboly dia matetika apetraka amin'ny karatra. Izy ireo dia mety noho izany ho fahatsiarovana tsara ho an'ny zaza ary mahita toerana mahafinaritra amin'ny karatra firariana ho an'ny havana aman-tsakaiza ary koa ho an'ireo raikely sy renikely. Safidy tsara ny mitondra faniriana ho an'ny olona hatao batisa. Miaraka amin'ny fanampian'ny fahendrena voafantina dia azonao atao ny maneho ireo faniriana ireo.
Ny zanaka dia fitahiana - tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany, fa ho an'ny zanak'olombelona ihany koa. Tsy fantatra ny mpanoratra
Tiavo izao tontolo izao rehefa mandray anao izy ary hanao zavatra lehibe ianao. Tsy fantatra ny mpanoratra
Ny zanaka no antoka lehibe indrindra amin'ny fanambadiana, mifamatotra sy mitazona ny fatoram-pitiavana izy ireo. Martin Luther
Tsy ny chrism na ny batemy no manampy amin'ny adala. Tsy fantatra ny mpanoratra
Mila mieritreritra lavitra kokoa noho ny nahatongavanao foana ianao. Teny taloha alemanina.
Tokony ho afaka ny zaza iray, satria mampirisika ny famoronana ny fahalalahana. Ary ny famoronana dia fiainana - mitombo, mihomehy ary tia. Tsy fantatra
Tsy maninona ny lasa - ny ho avy no zava-dehibe. Avelao ianao ho babo azy, amin'ny fitahian'Andriamanitra. Tsy fantatra ny mpanoratra
Mirary anao hery sy tanjaka ary herim-po. Satria ny fiainana amin'ny fomba toy izany amin'ny finoana ny ho avy tsara kokoa sy tsara kokoa dia hahatonga anao ho lehibe. Tsy fantatra ny mpanoratra
Tahio ny zaza ary tahio ny ray aman-dreny. Ny fitiavana no rohy mifamatotra amin'ny fotoana rehetra. Tsy fantatra ny mpanoratra
Nahatonga ahy ho mahafinaritra ianao. Salamo 139,14: XNUMX
Iaveh no fahazavako sy famonjena ahy, iza no hatahorako? Ny Tompo no herin'ny fiainako, iza no hatahorako? Teny nalaina avy ao amin'ny Baiboly Salamo 27
Avelao ny ankizy hanatona ahy fa aza sakano izy ireo. Fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Teny nalaina avy ao amin'ny Baiboly
Miaina sy miaina. Ambonin'ny zavatra rehetra amin'ny fitiavana sy amin'ny fo. Tsy fantatra
Ento any aminao ity zaza ity, arovy izy ary ampitiavo amin'ny fitiavanao. Ny tananao miaro dia mety ho mpiara-miasa tsy tapaka amin'ny fiainan'ity zaza ity. Amin'ny batemy masina dia tsy ny fiainana ihany no manomboka fa ny fitiavana koa. Tsy fantatra ny mpanoratra
Amin'ny ankapobeny, maniry fotsiny izahay fa handeha tsara ny zava-drehetra. Tsy fantatra
Tandremo ireo izay maniry zavatra ratsy ary mankanesa amin'ireo izay tia anao. Tsy fantatra ny mpanoratra
Izay manery ny fitiavana any amin'izay tsy misy, mijanona ho adala raha mbola eo izy. Fahendrena isam-bahoaka
Ny ankizy dia vahiny amin'ny tontolontsika. Noraisinay izy tamin'ny andro nahaterahany. Ny andro batisa dia fiarahabana avy amin'Andriamanitra - fandraisana tsara. Tsy fantatra ny mpanoratra
Ny olona tsy hanaiky velively hoe olon-dehibe ny zaza dia ho ray aman-dreny.
Miaraka aminao ny fahasambarana sy ny fiantrana manomboka anio. Miambina hatrany eo anilan'Andriamanitra ianao dia tokony handeha amin'izay alehanao. Mandehana tsara, fa mahereza. Sahia mizaha izao tontolo izao satria mahafinaritra izany. Tsy fantatra ny mpanoratra
Enga anie ka handeha tsara foana ireo vita batemy! Ny iray tia miarahaba azy sy ny ray aman-dreniny. Enga anie ho eo ambanin'ny kintana tsara, ny fiainam-pianakaviana manontolo! Tsy fantatra ny mpanoratra
Isika izao dia mitondra zaza hatao batisa. Hamarino Andriamanitra fa handeha tsara ny zava-drehetra. Mitombo, mihomehy ary mandrosoa nefa tsy mikiakiaka be. Tsy fantatra ny mpanoratra